Bulgarian - iyithuluzi elibalulekile ekufezeni ukwakhiwa ahlukahlukene, ukufakwa kanye umsebenzi wokulungisa. Umsebenzi oyinhloko wale yunithi kuyinto ahlabayo okusheshayo metal noma amatshe. Futhi, sibonga okunamathiselwe ekhethekile uyakwazi sanded ngokucophelela kobuso ingxenye, ukuwuhlanza futhi ukususa ukungcola ezijulile nenkani (ngokuvamile nokugqwala). Nokho, ukuze sandise kwenkululeko isicelo zedivayisi, abaningi uthole ngisho kudivayisi okuzenzela eyenzelwe grinders. Namuhla sibheka lokho izesekeli nezinamathiselo anegunya ezifunwayo ukwakhiwa, futhi indlela yokwenza ngezandla zabo.
Okwamanje, kukhona izesekeli eziningi ezahlukene ukuthi kungaba ngokuphawulekayo ukwandisa kwenkululeko ukusetshenziswa grinder elula. Enjalo, isibonelo, yilezi:
Imibhobho esemzimbeni ngoba sanding evele nokususa upende omdala.
Protractors (sizoxoxa ngazo ekupheleni isihloko).
Kuyaphawuleka ukuthi iningi abanikazi namanje bakhetha ukuthenga umlomo wombhobho ngomumo eyenziwe esitolo kunokukhipha bebodwa. awayona ayebiza kangaka, futhi abawatholayo akunzima. Kodwa abanye abaculi ukukhiqiza idatha kumadivayisi ngezandla zabo. ukufunda ngakho kabanzi ngezansi.
Indlela yokwenza amadivayisi okuzenzela for grinders? amathuluzi Ukupheka
Ukuze enze le misebenzi, uzodinga kumadivayisi alandelayo:
sokuprakthiza kagesi nge iqoqo sokuprakthiza ibhithi;
Hacksaw emthini ;
akwazi ukugcina i-grinders nge ububanzi 125 amamilimitha angu.
Yini okufanele uzilungiselele izinto?
Udinga ukuthenga zokhuni (2 PC.), Metal endaweni we steel dural nesitsha esisodwa. Futhi, uzodinga ngezikulufo ubukhulu 3 ... 3.5h16 ... 35 kwangu. Odinga 8 salezi zici.
Okokuqala, ipuleti metal inqanyulwa. Ngaphezu kwalokho eyenziwe dural ekhoneni engela. Kulula - wena nje kufanele enze cutout esime calantsatfu omunye imininingwane emashalofini futhi bend ke engela kwesokudla. Isakhiwo zensimbi plate 6, kumele izimbobo yamba ububanzi 4 mm ngamunye. Kuyadingeka ukuba aqinisekise ngezikulufo ukusingatha emakhoneni futhi block ngokhuni. Kuyaphawuleka ukuthi ngalinye lala izimbobo Kumele ube indentation ngaphansi ngezikulufo-bonnet.
Isibambo is nasezinsikeni ibha esebenzisa ngezikulufo ezimbili. Ubukhulu we iziqobosho kumele kube 3h35 amamilimitha angu. Ngakho uthola L emise lento. Zonke lezi zinto, kanye ipuleti ndawonye uya phambili. Kulesi lithathelwe for baseBulgaria awashintsheki nge 4 ngezikulufo 3x20 mm.
Ngakho, esekelwe izakhi esesiyenzile kakade. Manje, lapha udinga ukufaka engeli steel. Kufanele kube ezimbili - ne Ubukhulu 60 × 60 × 45 55 × 30 × 75 mm. Kuyaphawuleka ukuthi le ndawo lokuqala udinga ukuqondisa kusuka 90 0 kuya ku-60 0. Uma ungaphenduki, phezu grinders umkhiqizo esinjalo ncamashi kuvikelwe. Yini okufanele uyenze ngokulandelayo? Ngemva kokufaka i-engele steel sazimatanisa kubo Bulgarian. Ixhumeke nedivaysi esebenzisa isibambo ayo ngesandla esisodwa, futhi ngakolunye - nge umshudo kanye Ilokhi nut "M" uchungechunge (8 × 20 kwangu). Lesi sakamuva kudingeka uyasikrufulula ngezikulufo kusuka kudivayisi ngesikhathi ahlabayo material. Faka ukhiye nut isibambo ozikhethela, njengoba izogcina isandla wena. Konke kulesigaba ikhanda ahlabayo yenziwa ngempumelelo.
Amadivayisi anjalo ukuze baseBulgaria asetshenziswayo ukwenza imizamo opharetha okuvalelwe ukwenza umsebenzi impahla ahlabayo. Ngiyavuma ukuba siqhubeke isisindo grinders besiyoba sikhulu amahora ambalwa kunzima. Ngenxa yalesi sizathu, wizadi eziningi ukwenza uhlaka ekhethekile, okuvumela ukuba afeze umsebenzi cutting metal kanye nemikhiqizo cishe ngesandla esisodwa.
Indlela yokwenza leli thuluzi ukuze grinder ngezandla zakhe? Ukuze uqale, kudingeka wenze ibhokisi lokhuni. Kwanele ukwenza ohlangothini olulodwa kuphela zokuthola grinder. Zonke ezinye izindonga ziyasuswa, indawo yabo unamathisele imilenze.
Kodwa kule Bulgarian wawuphumelela ngempela, kufanele uqale ukuzivumelanisa ku-"zezemvelo" entsha. Yini okudingeka ngikwenze? Okokuqala ithuluzi kuyadingeka ukukhipha ikhava zokuzivikela. Okulandelayo ku-grinder lufakwa disc. Lapho belunguza ngokumelene ohlangothini udonga ithuluzi, uphawu lapho umqhewu senziwa ukuhambisa umlomo wombhobho noma disc. Akufanele kube ubanzi kakhulu (ibanga - ukuba ngaphakathi ocingweni ayivumeli lezinto angaphandle). Nokho, igebe kungaba futhi ukwandisa. Lokhu kwenziwa ezimweni lapho kukhona isidingo esikhundleni okusheshayo Imibhobho esemzimbeni ngaphandle ukuqaqa isakhiwo sonke. Njengoba isekela, ungasebenzisa izingcezu ezimbili kwezinkuni. Konke manje kungenzeka ukuba uthole ngokuphepha ukuze isebenze okwabonwa usike ezihlukahlukene izinto kanye nemikhiqizo.
Protractor - ithuluzi ezibaluleke kakhulu ekufezeni ukwakhiwa kanye ukufakwa kwemisebenzi. Lezi amadivayisi Abantu baseBulgaria bangabantu esisemqoka ukwelashwa kanye ahlabayo yokukhanya amaphrofayli metal. Ukusebenzisa ithuluzi ngokunemba high ukubala izinto ukusika engela kanye ukuboniswa umsebenzi owawenziwa. Ngaphezu amaphrofayli metal, leli thuluzi futhi kabanzi ezifunwayo ukucutshungulwa Tile, flooring futhi baseboards. protractor Homemade kuyindlela olukhulu kumathuluzi besiyoba sikhulu futhi ezibizayo, okuyinto naye kubhekiselwa kuye njengoMsindisi ezikhethekile. Ingahle inzuzo okudayiswayo kwezikhali ezenziwe ekhaya, kodwa lokhu nakanjani kube isici esisemqoka kulelikhaya.
yokusebenza kwalo isimiso simiswe ngalendlela lelandzelako:
Tile Okokuqala (noma ezinye izinto ukuba cut) ibekwe phezu Umhlahlandlela endaweni nge ulwelwesi antifriction. Lesi sakamuva has a high anti-ukushelela izakhiwo, okuyinto kuvimbela ukuhamba izingxenye zedivayisi.
Okulandelayo, preform ziqine agxishiwe kuya Flanges ye-engeli, okwathi ngemva kwalokho u-opharetha lidalula engela oyifunayo cut.
Khona-ke uqala impahla ahlabayo. Lapha kubalulekile ukuba sicabangele ukuthi Imi wena nje push kancane on the disc - umzamo owengeziwe kuleli cala lutho.
idatha Ukwakhiwa ngoba baseBulgaria amadivayisi aqukethe izingxenye ezilandelayo:
Ngeshwa, lezi amathiphu grinder asikwazi ukwenziwa ngesandla, ngenxa isakhiwo sabo eziyinkimbinkimbi. Ngakho-ke kuhle kakhulu ukuba uwuthenge inclinometers ezifana ezitolo ezikhethekile.